प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्नः छोराछोरीलाई बन्दुक बोकाएर जंगल लानु मेरो दोष हो ? | सुदुरपश्चिम खबर
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्नः छोराछोरीलाई बन्दुक बोकाएर जंगल लानु मेरो दोष हो ?
विराटनगर :नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहले शुक्रबार विराटनगरमा विरोधसभा गरेको छ । विराटनगरस्थित महेन्द्रचोकको सडकमा विरोधसभा गरेको हो ।
शुक्रबार एउटै मञ्चबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र योगेश भट्टराईले विरोधसभालाई सम्बोधन गरे ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले नेकपा भित्र तमासा गर्ने एक मात्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी ओली भएकाले उनले चालेका कदमको विरोधमा दैनिक सडकमा नागरिक थपिने क्रम बढेको बताए ।
‘जनताको त्याग र बलिदानबाट आएको संविधानको घाँटी रेट्ने काम केपी ओलीबाट भएको छ,’ उनले भने ‘आफूलाई प्रथम अध्यक्ष भन्ने तर पार्टीलाई नमान्ने एक मात्र पार्टी भित्रको तमासा गर्ने व्यक्ति केपी ओलीनै हुन्।’
नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पछारिएपछि पनि खुट्टा उचालेर ओलीले मेरो खुट्टा माथि नै छ भनिरहेको आरोपसमेत लगाए । वकिल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पत्रकार, नागरिक समाजलाई सबैलाई ओलीले अपमान गरेको नेपालको आरोप छ ।
छोराछोरीलाई बन्दुक बोकाएर जंगल लानु मेरो दोष हो ?
सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिक्रियावादी एजेण्टले सार्वभौम संविधानलाई अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भष्मासुर भन्दै प्रतिक्रियावादीको एजेन्ट र दालल भएर संसद विघटन गरेको बताए ।
चुनावी अभियानको बेला छोराको त्यही सेरोफेरोमा आफ्नो छोरीको पनि निधन भएको सम्झिँदै प्रचण्डले देशलाई समाजवादको दिशामा लागेर अहिलेका युवा युवतीलाई उज्यालो पार्ने आफ्नो सपना रहेको बताए । आफ्ना नाता गोतालाई मात्र हेर्ने गरेको आरोप ओलीले आफूलाई लगाएको भन्दै उनले ओलीलाई ‘नपुंसक’को संज्ञा दिए । ‘म नपुंसक नहुनु मेरो दोष हो ?, आफैँलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘म नपुंसक भइन, म निसन्तान भइन, के मेरो दोष हो ? मैले अमेरिका छोराछोरी पठाइन, छोराछोरीलाई म सँगै बन्दुक बोकाएर जंगल लिएर गएँ त्यो मेरो दोष हो ?’ उनले भने ।
प्रचण्डले देश कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको बेला औषधि ल्याउनका लागि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई च्यापेको, ७० करोड भ्रष्टाचार गर्नेलाई ओलीले जोगाएको समेत आरोप लगाए ।
प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा भंग नभएको दोहोर्याउँदै केपी ओलीले गुण्डागर्दी शैलीमा जे गर्यो त्यही नहुने भन्दै र संविधान अनुसार संसद भंग नभएको दाबी गरे । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको संसद विघटन स्वीकार्न नसक्ने भएकाले सभामुख मार्फत संसद बोलाउन सक्ने दाबी उनले गरे ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता योगेश भट्टराईले यस्तो समयमा पनि कांग्रेस मौन बस्नु कांग्रेसका पूर्व नेताहरुको अपमान भएको बताए । ‘पहिले संविधान विरोधी काम हुँदा र प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा कांग्रेस सडकमा थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेस मौन बस्नु आफ्नो इतिहास बिर्सनु हो ।